रिटर्न र एक्सचेन्जहरू: Return 45 दिन फिर्ता वा आदानप्रदान गर्न - मिडियालाइट बायस प्रकाश
रिटर्न र एक्सचेन्जहरू: Return 45 दिन फिर्ता वा एक्सचेन्जको लागि
यी हाम्रो संयुक्त राज्य अमेरिका वेबसाइट को फिर्ता नीतिहरु हो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीहरू मई उल्लेखनीय रूपमा फरक फिर्ता नीतिहरू छन्। यदि तपाईंले अर्को वेबसाइटबाट खरिद गर्नुभयो भने, तपाईंले त्यस साइटको लागि फिर्ता नीतिहरू समीक्षा गर्नुपर्छ। यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाग्रह लाइटिङ अर्डरहरू MediaLight वा LX1 वारेन्टीहरू अन्तर्गत कभर हुन्छन् जहाँ तिनीहरू बेचिन्छन् (केवल एक इनभ्वाइस हुन निश्चित हुनुहोस्)।
यदि तपाइँ आफ्नो MediaLight को साथ समस्या सामना गर्नुहुन्छ भने, प्रत्येक समस्या हाम्रो व्यापक अन्तर्गत कभर गरिएको छ5वर्ष ग्यारेन्टी. यद्यपि, सायद तपाईंलाई थाहा थिएन कि तपाईंले के आदेश दिनुभयो वा टिभी फिर्ता गर्नुभयो र अब तपाईंलाई मिडियालाइटको आवश्यक पर्दैन।
तपाइँ एक फिर्ता को लागी तपाइँको MediaLight फिर्ता गर्न को लागी एक कारण को आवश्यकता छैन, र त्यहाँ कुनै restocking शुल्क छैन, जे होस्, हामी कहिलेकाहीँ हराइरहेका वस्तुहरु को लागी कटौती गर्छौं वा यदि धेरै वस्तुहरु प्रयोग गरीन्छन् र अनुपयोगी अवस्थामा फर्काइन्छ (कृपया हामीलाई आकार मा जानकारी को लागी धेरै आकार मा कोशिश गर्नुको लागी सम्पर्क गर्नुहोस्!) यी शुल्कहरु यस पृष्ठ को तल मा गणना गरीएको छ।
तपाइँ एक फिर्ता को लागी एक कारण प्रदान गर्न को लागी आवश्यक छैन, तर त्यसो गर्दै:
1) तपाईंको फिर्ती छिटो हुन सक्छ किनकि यसले हामीलाई फिर्ता गरिएको वस्तुको परीक्षणमा केही समय बचत गर्छ
2) फिर्ता एक खराबी वा स्थापना मुद्दा को कारण हो भने हामीलाई तपाइँको समस्या को समाधान गर्न को लागी अनुमति दिन सक्छ
प्याकेजमा लेख्नको लागि फिर्ता व्यापार प्राधिकरण नम्बर (RMA) प्राप्त गर्न कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। RMA बिना अनाधिकृत रिटर्नहरू अर्डरसँग मिलाउन गाह्रो हुन सक्छ, जसको परिणामस्वरूप वस्तु हराउन सक्छ र तपाईंले हकदार भएको हुन सक्ने कुनै पनि फिर्ती। कृपया सचेत रहनुहोस् कि ढुवानी फिर्ता योग्य छैन र हामी फिर्ता शिपिंग भुक्तान गर्दैनौं। यद्यपि, यदि तपाईं हामीलाई फिर्ताको लेबल पठाउन चाहनुहुन्छ भने, हामी त्यसो गर्न पाउँदा खुसी छौं र फिर्ती जारी भएपछि लागत कटौती गर्नेछौं।
उद्योग मापदण्डको साथ, ब्लू-रे डिस्कहरू र प्याकेज गरिएको मिडिया, एक पटक खोलिए पछि, फिर्ताको लागि अयोग्य छन्। त्यस्तै, डाउनलोडहरू फिर्ताको लागि अयोग्य छन्। दोषपूर्ण वा बिग्रिएको डिस्कहरू हुन् सधैं विनिमयको लागि योग्य।
सबै पूर्वाग्रह लाइटहरू नि: शुल्क आदानप्रदानका लागि योग्य छन्।
हराइरहेको कम्पोनेन्टहरूको अवस्थामा, वा चरम र/वा जानबूझेर हाम्रो उत्पादनमा क्षति पुगेमा, हामी फिर्ता गरिएको वस्तुको मूल्यको 100% सम्मको पुन: स्टकिङ शुल्क कटौती गर्ने अधिकार राख्छौं। (हराएको कम्पोनेन्टहरूको पूर्ण सूची र तिनीहरूको अतिरिक्त रिस्टोकिंग शुल्कहरू यस पृष्ठको तल फेला पार्न सकिन्छ)।
यदि एक इकाई प्रयोग नगरिएको वा खोलेको फिर्ता गरियो भने, त्यहाँ पुनः रोकि rest शुल्क छैन। केवल एक RMA-U अनुरोध गर्नुहोस् (खोलिएको व्यापारको लागि RMA) र यसलाई फिर्ता पठाउनुहोस्।
ट्र्याकिंग संग एक विधि प्रयोग गर्न निश्चित गर्नुहोस्, र यसको मेलरमा वस्तु सुरक्षित गर्नुहोस्। हामी फिर्ती जारी गर्दैनौं यदि कुनै वस्तु प्राप्त भएको छैन वा यसको प्याकेजबाट "बाहिर जान्छ"। केवल एक खुला MediaLight वा LX1 प्याकेज गर्न एक लेबल छडी नगर्नुहोस्।
यदि तपाइँ अनिश्चित हुनुहुन्छ कि तपाइँ प्रयोग गर्न वा स्थायी रूप बाट बत्तीहरु लाई स्थापित गर्न चाहानुहुन्छ, कृपया रातो चिपकने वाला समर्थन हटाउन नदिनुहोस् र पट्टी काट्नुहोस्। मास्किंग टेप वा अन्य अस्थायी चिपकने टेप एक स्थापना गर्न को लागी पहिले स्थापना को परीक्षण गर्न को लागी प्रयोग गर्नुहोस्। हामी शुल्क तिर्दैनौं यदि तपाइँ तपाइँको टिभी बाट रोशनी छील, तर हामी बर्बाद कम गर्न प्रतिबद्ध छौं।
हराइरहेको वा ग्राहक बिग्रिएको कम्पोनेन्टहरूको लागि अतिरिक्त पुन: शुल्क शुल्कहरू (यी शुल्कहरू हाम्रो रिस्टोरिंग शुल्कको अतिरिक्त हुन् र यी वस्तुहरूको व्यक्तिगत मूल्यमा बेच्दा हाम्रो मूल्यहरूसँग मेल खान्छ):
रिमोट कन्ट्रोल र / वा डिमर: $ १०
.5 मी वा4फुट विस्तार: $ 5
AC एडेप्टर: $ 6.50०
USB स्विच: $ 4.00००
मिडियालाइट स्ट्रिप: फिर्ता नगरे सम्म फिर्ता हुने छैन
डेस्क लैम्प हुड: $ 8
हराइरहेको मिडियालाइट र LX1 स्ट्रिप खण्डहरू: खरीद मूल्यको आधारमा प्रोरेटेड।